အကောက်တောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေး အကောင်တောင်နံရံရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ
အကောက်တောင်သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ထုံးဘိုမြို့ အဆုံးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတခရိုင် ကြံခင်းမြို့နယ် သောကြာဒူး ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးယံရှိ ကျောက်သားနံရံများတွင် ရေးထွင်းထားသော ရှေးဟောင်းဘုရားဆင်းတုများ အမြောက်အမြားရှိသည့်အတွက် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးဧည့်သည်များသာမက နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများလည်း လာရောက်လည်ပတ်ဖူးမြော်ကြသည်။ ရှေးအခါက ဤနေရာသည် လှေသင်္ဘောများကို အခွန်ကောက်ယူရာ နေရာဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် လှေဖြင့်ပါလာကြသော ကျောက်ဆစ်ပညာရှင်များက ကျောက်တောင်ကမ်းပါးယံကြီးများကို ထွင်းထု၍ နှောင်းလူတို့ ပူဇော်နိုင်ရန် မိမိတို့တတ်မြောက်ထားသည့်ပညာဖြင့် လုပ်အားဒါနပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အကောက်တောင်တွင် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ပေါင်း (၃၇ဝ) ခန့်ကိုဖူးမြော်တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ဆင်းတုတော်အားလုံးသည် ကျောက်သား နံရံပေါ်တွင် ထွင်းထုထားသော ကျောက်ဆစ်လက်ရာများဖြစ်ပြီး ထိုင်တော်မူ ဆင်းတုတော် (၂၄၆) ဆူ၊ ရပ်တော်မူဆင်းတု (၁ဝ၉) ဆူနှင့် လျောင်းတော်မူဆင်းတုတော် (၁၅) ဆူခန့် ရှိသည်။ ရုပ်ပွားတော်များ၏ လက်ရာများမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ်လက်ရာများဖြစ်ပြီး အင်းဝခေတ်လက်ရာအချို့လည်း ပါဝင်သည်ဟု သုတေသီများက ခန့်မှန်းကြသည်။ 
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး သခင်မြ မွေးရပ်မြေ ထုံးဘိုမြို့ လှေဆိပ်
အကောက်တောင်သည် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ကြံခင်းမြို့နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်းမြို့နယ် ထုံးဘိုမြို့ နယ်နိမိတ် ဆုံစည်းရာ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းဘေး၌ ကျောက်နံရံကပ် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များဖြင့် ကြည်ညိုဖွယ်ရာ တည်ရှိသည်။ ပြည်မြို့မှ အနောက်ဘက်ရှိ ထုံးဘိုမြို့သို့ ကားလမ်းဖြင့် မိုင် (၄၀)ခန့်သွားရသည်။ ထုံးဘိုမြို့သည် အာဇာနည်ကိုးဦးထဲတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သော ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး သခင်မြ၏ ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေဖြစ်သည်။ ထုံးဘိုမြို့မှ အကောက်တောင်သို့ လမ်း (၂)လမ်းဖြင့်သွားနိုင်သည်။ တစ်လမ်းမှာ ခရီးတိုသောဖြတ်လမ်းဖြစ်၍ မတ်စောက်ကျင်းမြောင်းပြီး ကားသွားနိုင်သည့်လမ်းကြမ်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်လမ်းမှာ ထုံးဘိုလှေဆိပ်မှ စက်လှေဖြင့် မိနစ်(၂ဝ)ခန့်အကြာ အကောက်တောင် မြစ်ကမ်းပါးမှ တောင်ပေါ်သို့ လှေကားဖြင့်တက်ရသော လမ်းဖြစ်ပြီး မြစ်ကမ်းရှိ ကျောက်သားနံရံများတွင် ရှေးဟောင်းဘုရားဆင်းတုများကို မြင်တော့ရသောကြောင့် ဘုရားဖူးဧည့်သည်များ အသွားများသော လမ်းဖြစ်သည်။ တောင်ပေါ်တွင် ရွှေမြင်းတင်စေတီနှင့် သာသနိကအဆောက်အဦများရှိပြီး အကောက်တောင်ဆရာတော်မှ သတ်သတ်လွတ် စတုဒီသာကျွေးသည်။
အကောက်တောင် ကို ရှေးအခါက ရတနာပုဉ္စတောင်တော်မြတ် ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ကျော်က ထုံးဘိုမြို့တည်ရှိရာ ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းခြေတွင် သီရိဘင်္ဂလွန် အမည်ရှိသော မြို့ကြီးတစ်မြို့ရှိခဲ့သည်။ ထိုမြို့တွင် သီရိဘင်္ဂလွန်မင်းကြီး ထီးနန်းစိုးစံခဲ့ပြီး တောင်နန်းစံမိဖုရားမှ သားတော်(၃)ပါး ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ သားတော်ကြီးမှာ မဟာပုမဉ္စမင်းသား၊ သားတော်လတ်မှာ စူဠပုမဉ္စမင်းသား နှင့် သားတော်ငယ်မှာ သံပုဉ္စမင်းသား ဖြစ်သည်။ မင်းကြီးသည် သားတော်ကြီး မဟာပုဉ္စမင်းသား ကို အိမ်ရှေ့မင်းသားရားထူးပေးသနားပြီး သိဒ္ဓဝနမြင်း ကို ပေးတော်မူ၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ သရီယဓာတ်တော်(၃)ဆူကို သိရီဘင်္ဂလွန်မင်းကြီး ကိုးကွယ်ရန်ဟူ၍ ထူဆန်းစွာ ဆက်သရောက်ရှိလာသောအခါတွင် သားတော်(၃)ပါးတို့ကို တစ်ဆူစီပေးအပ်၍ အကောက်တောင်ပေါ်တွင် စေတီသုံးဆူ တည်စေသည်။ ထိုအခါ တောင်တော်ပေါ်တွင်ရှိနေသော ဝိဇ္ဇာ၊ ဇော်ဂျီ၊ တပသီတို့သည် မင်းသား(၃)ပါးဘုရားတည်ရန် လိုအပ်သော ရွှေငွေရတနာများကို ပြည့်စုံလောက်အောင် ပြုပြင်စီမံ ဖန်တီးပေးခဲ့ကြသည်။ သားတော်ကြီး မဟာပုဉ္စမင်းသား သည် ရွှေ၊ ငွေ၊ ရတနာတို့ကို သိဒ္ဓဝနတ်မြင်း နှင့် တင်၍ ရတနာများကို ဌာပနာကာ တောင်စွန်းတွင် ရတနာပုဉ္စစေတီကို တည်ခဲ့သည်။ ရတနာပစ္စည်းများကို သိဒ္ဓဝနတ်မြင်းဖြင့် တင်ဆောင်ယူခဲ့ပြီး ဌာပနာသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ရွှေမြင်းတင်စေတီတော်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ သားတော်လတ် စူဠပဉ္စမင်းသား သည် ရတနာပုဉ္စစေတီ မှ တောင်ဘက်တစ်ဖာလုံခန့်အကွာ တောင်စွန်းပေါ်တွင် ဌာပနာပစ္စည်းများကို ရထားနှင့် သယ်ဆောင်ယူကာ စေတီတည်ထားသဖြင့် ရထာပဉ္စစေတီ ဟူသော ဘွဲ့တော်ချီခဲ့သည်။ သားတော်အငယ်ဆုံး သံပုဉ္စမင်းသား သည် ရတနာပုဉ္စစေတီ မှ မြောက်ဘက်တစ်ဖာလုံခန့်အကွာ တောင်စွန်းပေါ်တွင် ဌာပနာပစ္စည်းများကို လှည်းဖြင့် တင်ဆောင်ယူကာ စေတီတည်ထားသဖြင့် သက္ကဋာပုဉ္စစေတီ ဟု ဘွဲ့တော်ချီခဲ့ပြီး နောက်တွင် ရွှေလှည်းတင်စေတီ ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ယခင်က စေတီတော် (၃) ဆူလုံးမှာ သပ္ပါယ်စွာ စံပယ်ခဲ့ကြသော်လည်း ညီတော်နှစ်ပါး၏ စေတီနှစ်ဆူကို မသူတော်သိုက်ဆရာများ သိုက်တူးယူခြင်းကြောင့် ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် နောင်တော်ကြီး၏ ရတနာပုဉ္စစေတီ (ခေါ်) ရွှေမြင်းတင်စေတီတော်သာ ခေတ်အဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်နိုင်ကာ ယခုတိုင် ကျန်ရှိနေခဲ့သည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ်နှောင်းပိုင်းကာလ မင်းတုန်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင် မြို့ဝန် ဦးကောက်ရ အား ရတနာပုဉ္စတောင်ခြေ ကို အခြေပြု၍ ရေလမ်းခရီး အစုန် အဆန် သမ္ဗာန် သင်္ဘောများကို အခွန်ကောက်ခံ၍ နေပြည်တော်သို့ ဆက်သရန် အမိန့်တော်မှတ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ မြို့ဝန် ဦးကောက်ရ သည် တောင်စွန်းအခြေမှ အကောက်ရုံးဆောက်လုပ်၍ အခွန်ကောက်ခံသည်မှစ၍ ရတနာပုဉ္စတောင်ကို အကောက်တောင် ဟုခေါ်စမှတ်ပြုခဲ့သည်။ မြတ်စွာဘုရားကျီးမင်း ဖြစ်စဉ်အခါက ၎င်းတောင်ပေါ်ရှိ သစ်သီးသစ်ဥများ ကောက်ယူစားသုံးခဲ့သောကြောင့် အစာကောက်တောင်(သို့) အကောက်တောင် ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်ဆိုသော ဆိုရိုးစကားလည်းရှိသည်။
အကောက်တောင်သည် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးတွင် သဘာဝခံတပ်သဖွယ် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ကာ နယ်ချဲ့ရန်ကို ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းဖြစ်ရပ်ရှိခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ ဒုတိယ ကျူးကျော်စစ်ကာလတွင် နယ်ချဲ့တို့ကို ခုခံတိုက်ခိုက်ရန် သတိုးသီရိ သုဓမ္မ မဟာဗန္ဓုလ၏ သားတော် သုံးဆယ်မြို့စား ဝန်ကြီး မင်းလှမင်းခေါင်ရာဇာ ဦးဆောင်လျက် ရဲမက်အင်အားများစွာဖြင့် အကောက်တောင်တွင် စခန်းချနေခဲ့သည်။ ၁၈၅၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဗိုလ်တာလီယန် ဦးဆောင်သော အင်္ဂလိပ်ရေတပ်အဖွဲ့သည် စစ်သင်္ဘော ငါးစင်းဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်အတိုင်း ဆန်တက်လာကြပြီး အကောက်တောင်တွင် တိုက်ပွဲအပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အင်္ဂလိပ်တို့၏ အဝေးပစ် အမြောက်လက်နက်ဒဏ်ကို မခံနိုင်သဖြင့် မြန်မာစစ်သည်များ၏ အသက်ချွေးများ ဤနေရာတွင် စတေးခဲ့ကြရသည်။ ထိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်တွင် ရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားမှာလည်း နယ်ချဲ့တို့ဘက်မှ ရပ်တည်သကဲ့သို့ ရှိသဖြင့် နယ်ချဲ့စစ်သင်္ဘောများ အလျင်အမြန် ဆန်တက်လာနိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်မြို့ကို ရုတ်တရက် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာတို့ အပြင်းအထန် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရာ ၁၈၅၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အကောက်တောင်ကို ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး အကောက်တောင်တွင် အမြောက်များ တပ်ဆင်ကာ ဖြတ်သန်းသွားလာကြသော အင်္ဂလိပ်သင်္ဘောများကို ပစ်ခတ်နှောင့်ယှက်ခဲ့ကြသည်။
၁၈၅၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်တွင် ဗိုလ်ကြီးဂတ်နာ ဦးစီးသည့် အင်္ဂလိပ်တပ်စိတ်သည် အင်္ဂလိပ်ရေတပ်သင်္ဘော အင်တာပရိုက်ဖြင့် ပြည်မြို့မှ စုန်ဆင်းပြီး အကောက်တောင်သို့ ရောက်ရှိလာကြရာ ကမ်းပေါ်တက်ရောက်လာသော ထိုအင်္ဂလိပ်တပ်စိတ်ကို မြန်မာတို့ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် ဗိုလ်ကြီးဂတ်နာ ကျဆုံးခဲ့ပြီး ယင်း၏အလောင်းကို ကောက်ယူရန်ကြိုးစားသော စစ်ဗာရီအရာရှိတစ်ဦးပါ ထပ်မံကျဆုံးခဲ့ရသည်။ 
↑ မင်းဂုဏ် (ဧပြီလ ၂၀၁၅). အကောက်တောင် ကျောက်ကမ်းပါးယံပေါ်ရှိ နံရံကပ်ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်များ. လပြည့်ဝန်းမဂ္ဂဇင်း။
↑ မောင်မင်းထိုက်လွင် (၂၀၀၇). ထုံးဘိုမြို့ အကောက်တောင်ရှိ ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များ လေ့လာချက်. ဘွဲ့လွန်အသုံးချ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ ဒီပလိုမာဘွဲ့ကျမ်းငယ်။
နှစ်ထပ်သင်္ဘောမြို့ကလေးရယ် အကောက်တောင်ရယ် သွားကြမယ်ကွယ်- မဇ္ဈိမ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အကောက်တောင်&oldid=478537" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၅:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။